एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुको विकल्प छैन : डा. महत «
एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुको विकल्प छैन : डा. महत
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एमसीससी अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनको अंग नभएकोले नेपालले संसदबाट चाँडो पारित गर्नुपर्ने बताएक छन् । आइतबार काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रियामा उनले एमसीसीबारे भ्रममा नपर्नपनि सबैलाई आग्रह गरे ।
“यो मिलिटरी एलायन्स होइन । यसको मिलिटरीसँग कुनै सम्बन्ध छैन् । यसको प्युअर पर्पोज भनेको नै गरिबी निवारण हो ।” उनले भने, “एमसीसीबारे भ्रममा नपर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । यो सहयोग प्राप्त गर्न हामीले धेरै मेहनत गरेका छौं । यो कुनैपनि मुलुकको खिलाफमा छैन् । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढाउनको लागि एमसीसीअन्तर्गतका कार्यक्रमहरुले ठूलो मद्दत पुग्छ ।”
महतले सन् २००४ मा अमेरिकाको संसदले कानून बनाएर एमसीसी पास गरेको स्पष्ट पारे । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसको पालामा गरिब मुलुकहरुको उत्थानको लागि, गरिबी निवारणको लागि कार्यक्रम घोषणा गरेको बताए । २००४ बाट अमेरिकी सरकारले निश्चित् सर्त र मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरुलाई यो सहयोग दिने निर्णय गरेको पनि उनले बताए ।
अमेरिकाले अघि सारेका सर्तहरुमा त्यो देशमा नागरिक अधिकार छ कि छैन् ? राजनीतिक अधिकार, सुशासनको प्रत्याभूति, उदार आर्थिक नीति, लगानी प्रोत्साहनको वातावरण, मानवअधिकारको सुनिश्चितता्, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, गरिब निवारण, लैङिक समानतालगायतका शर्त र क्राईटएरिया पूरा गर्नेलाई एमसीसी सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
त्यसका लागि नेपालले पनि एप्लाई गरेको सुनाउँदै उनले सबै सर्त पूरा गरेर सहयोग लिन छनौट भएको दावी गरे । “२० वटा ईण्डिकेटरमा नेपाल १७ मा उच्च नम्बर ल्याउन सफल भएको थियो,” उनले भने ।
त्यतिवेला क्राईट–एरिया पूरा गर्ने देशलाई अमेरिकाले तीसदेखि ७० करोडसम्म डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको पनि उनले बताए । उनले भने, “विकासको लागि बाईण्डिङ कन्सेन्ट भनेको पूर्वाधारको विकास नै हो । दोस्रो, पावर डेभलपमेन्ट र ईनर्जी डेभलपमेन्ट र ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट हो ।” उनले भने । सन् २०१५ मा आफू अर्थमन्त्री भएकै बेलामा नेपालमा एमसीसीको कार्यालय खुलेको पनि महतले स्पष्ट पारे ।
सन् २०१७ मा एमसीसीका लागि परियोजना नै छनौट गरिएको उनले सुनाए । अमेरिकाले पनि नेपालको आर्थिक नीतिदेखि अन्य सबै कुरा ठीक भएकोले परियोजना स्वीकृत गरेको पनि उनले बताए ।
उनले चीनबाट पनि नेपालले सुरक्षासम्बन्धी सहयोग लिएको बताए । उनले भने, “चीन र भारतबाट पनि नेपालको सेनालाई सहयोग भएको छ । अमेरिकाले पनि सहयोग गरेको छ ।” एमसीसी त ‘ईकोनोमिक–फेनोमेन’ भएको उनको भनाई छ ।